Stony Road dia manolotra tsy fitoviana tsotra, mahafinaritra ary kanto | Androidsis
Stony Road no Ketchapp vaovao miaraka amin'ny mekanika mahaliana sy mahafinaritra
Lalao mahazatra, mahazatra, lalao Ketchapp
Miverina amin'ny entana izahay miaraka amin'ny Lalao Ketchapp ary iray hafa amin'ireo lalao ireo tsotra, mahitsy ary mahazatra izay mahatonga antsika hanana fahafinaretana be. Efa nanao aho ity horonantsary ity momba ny lalao Ketchapp 15 tsara indrindra izay no ilazako hoe iza no tsara indrindra amin'ny fahitako azy. Ary ny marina dia miresaka momba ny iray amin'ireo fanadihadiana izay mamoaka ny lalao video be indrindra ao amin'ny Google Play Store izahay ka isan-kerinandro dia saika hanana iray vaovao isika, raha tsy izany dia misy hatramin'ny roa. Ny lalàna momba ny famoahana lalao Ketchapp dia tena tsotra ary tsy maintsy manana fandanjalanjana tsara amin'ny resaka sary, feo ary lalao. Raha mahafeno ireo singa telo ireo izy dia ho hitantsika maimaim-poana miaraka amin'izany maodely freemium izany ao amin'ny Google Play Store.
Stony Road no lalao video mahazatra nataonao izay, toy ny maro hafa, Miezaha miala amin'ny frills hifantoka amin'ny lalao somary sarotra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ireo tovolahy ao amin'ny Ketchapp Games fa tsy mila lalao mora izy ireo, ary hatramin'ny voalohany dia mandray ny baolina ianao, izay saika nahatongavanay dia ho tsapantsika fa tsy maintsy ho latsaka anaty lavaka tsy hita noanoa isika afaka manao an'io mitsambikina indroa io izay hahafahantsika manatratra an'io sehatra io. Iray amin'ireo lafiny mahavariana indrindra ao amin'ny Stony Road ny fomba fianjerana na fanjavonan'ny sakana, satria ireo vato ireo no hanova ny dia hamarinintsika.
1 Ireo vato tsy fantatra miafina eo alohanay
2 Ny baolina nanakodia ireo vato mistery ireo ...
Ireo vato tsy fantatra miafina eo alohanay
Ny lalao ny lalao dia tena tsotra ary misy ny fanaovana keystroke ho mitsambikina tokana na avo roa heny. Izany dia nilaza fa ny zavatra sarotra dia tonga amin'ny fepetra tsy maintsy raisintsika mba hahafahantsika mitsambikina ireo lavaka poakaty izay miseho saika tsy misy toerana ireo rehefa misaraka ireo vato miafina ireo. Tahaka ireo lavaka ireo dia hiseho tsy ho aiza ny vato izay hamorona karazana tohatra sy sakana rehetra izay tsy maintsy mailaka hitsambikina isika.
Eo anelanelan'ny fahasarotana amin'ny filalaovana sy ireo vato mifono mistery manao sary ny lalana, ho hitantsika ny tenantsika miatrika ny kisendrasendra ny lalao sy ny fomba sarotra indraindray mety hahazo isa tsara. Miorina amin'ny zavatra niainako manokana, amin'ny fotoana handalovanao ilay lavaka lehibe voalohany dia hisafidy ny hitsambikina ianao ary hahazo teboka bebe kokoa, koa raiso am-paharetana kely ary ahintsano tsara rehefa tsy maintsy manao ilay fitsambikinana farany ianao.
Ny baolina nanakodia ireo vato mistery ireo ...
Ary ity no Stony Road. Azontsika atao ny maneho hevitra momba ireo fanaingoana samihafa, mahazatra an'ireo lalao fohy ireo, saingy izany no izy, Stony Road tsy manome zavatra bebe kokoa fa tsy amin'ny lalao an-tserasera izay hankafizantsika ny safidy hendry avy amin'ny singa teknika tsirairay hanoritana lalao video izay manana ny hatsarany.
Mety hanjavona io hatsaran-tarehy io rehefa mandeha ny lalao, saingy tsorina hahantona anao ny tsy ampoizina dia ny tokony hitandremana ireo vato izay manjavona na tsy hita na aiza na aiza hamoronana karazana rafitra rehetra hiatrehantsika ny fitsambikinana.
Ny Ketchapp Games dia manana indray lalao mahafinaritra sy mahaliana ho an'ny lalao an-tsitrapo amin'ireo minitra izay tsy tadiavintsika afa-tsy zavatra izay miditra amin'ny masontsika, manantona antsika ary mamela antsika hanidy ny lalao nefa tsy mila miandry ny RAM an'ny fitaovana hiasa tanteraka.
Manana izany maimaim-poana ianao avy amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny micropayments mazava ho azy.
Stony Road dia lalao iray mahomby gala ny famolavolana lehibe hita maso miaraka amina paleta miloko tsara sy safidy hendry amin'ireo singa teknika vitsivitsy ananany. Tsy misy fampisehoana kely izany raha manana ny finday avo lenta amin'ny lahasa hafa isika, zavatra tsy tadidintsika ho lalao mahazatra, fa raha tsy izany dia hainy tsara ny milalao tsara amin'ireo karatra ananany.
Làlana feno vato
Fahafinaretana amin'ny fahitana
Mety ho sarotra be izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Stony Road no Ketchapp vaovao miaraka amin'ny mekanika mahaliana sy mahafinaritra